Ny fiainan'ny pelaka dia fiainam-pianakaviana. Homer sy Marge amin'ny taona 2018
Malagasy comics horonan-tsary simpsons 30 fizaran-taona, fianakaviana iray malaza no maka sary amin'ny TV 25 taona. Jereo vadiny miasa mafy Homer, manahy tanora ry zalahy mpikarakara tokantrano Marge mangina tsara dia tsara mpianatra tany am-pianarana Lisa, zanak'i Bart Simpson mirefarefa amin'ny boky sy sary vetaveta.
tena > Симпсоны
Ny fifandraisana dia lasa marefo, fifandimbiasana. Ilaina ny manombantombana rehefa mijery ny lozam-piraisana ara-nofo. Ny fisehoan-javatra amin'ny sariitatra dia miseho eo akaikin'ny fahitalavitra mipetraka eo amin'ny sofina. Ao anatin'ireo tantara malaza amin'ny pôrnôgrafia, ireo mpilalao sarimihetsika, mpiara-mianatra, fianakaviana, mpiasa sy mpiara-miasa dia mandray anjara. Mipetraka ao an-tanàna izy ireo, antsoina hoe Springfield. Ny teboka miaraka amin'ny renin'ny namana dia Milhouse.
Erotic simpsons - avantages
Ny firaiketan'ny Simpsons dia manao firaisana
Fitaovana entana amin'ny aterineto
Fampisehoana lehibe an'ny Cleveland
Mipetraha ao anaty rivotra iainana miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika amin'ny Cleveland. Ireo mponina ao Springfield dia mahafantatra ny momba ny firaisana be dia be, mandrindra ny fankalazana azy ireo antoko mpihinana. Ankafizo ny tsara indrindra an-tserasera lahatsary olon-dehibe ianao, dia ho gaga be ranony manaitaitra dingana ka manarona onjam-fihetseham!
Tianao ve ny manao firaisana ara-nofo amin'ny fomba iankinan'ny sariitatra, malaza amin'ny fantany? Jereo ny muzhik olon-dehibe anankiroa miaraka amin'ireo mpihinam-bolo manana fiarovan-tena tsy misy fiarovana ao anaty lavaka roa, mahavariana mahaliana! Nanaovan'i Sparks hafaliana ny hatsaran-tarehy, dia voavono ilay hanoanana ara-piraisana nataon'ny ankizivavy tsara tarehy iray.
Tovovavy maotona, mpianatra tsara iray avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa no nisafidy ny làlana eny an-dalana. Tetezamita voatery taona ny tovovavy Lisa manilika ny saina ho amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny alalan'ny fandefasana ny tsininy-tsaina manoloana ny mihaza ry zalahy, mijinja ny vokatry ny fandresena.
Ny zatovo saro-kenatra efa hatramin'ny ela dia nijery ny fihetsiky ny reniny. Ny fitondran-tena ratsy dia manosika ny marika ho amin'ny fitiavana sy ny fitiavana izay lasa lasa firaisana ara-nofo lehibe. Ny lehilahy dia mazoto miasa any am-piasana, mieritreritra vetivety izay mitranga.
Marge amin'ny razzle
Ny lohataona voalohan'ny masoandro ho an'ny Marge dia ny hormonina tsy voamarina ara-nofo izay nanakana ny torimaso. Homer, tavy kely kely, tsy afaka manome fahafaham-po ny faniriana ara-pananan'ny vadiny, izay nanery azy hiova amin'ny zanany lahy.
Manafina ny fiankinan-doha amin'ireo tovolahy tanora ao amin'ny dikan-tsarimihetsika voalohany. Ny fitsangatsanganan'ny vady, avelao hanao faniriana miafina miafina miafina, izay voasoritra amin'ny alina. Lonely ramatoa nanao kiraro, zipo fohy, ka mahatonga ny volo Misarika ny sain'ny mpandalo. Ny fiainana manokana mahery fo Hentai Simpsons - dia mampiseho ny manaitaitra teny manodidina, manitikitika ny saina tetika am-bava, hampianatra ny mpanatrika resaka mitondra mankany ny manao firaisana, teny voafidy tsara - ny fanalahidin'ny toe-javatra mahomby lamba firakotra. Vehivavy serial kokoa amin'ny lava-pitombenana, ny nisongadina ny mpanoratra - ons Browsing, minoa Ahy, ny isan'ny toerana faly gaga mandinika ny zava-misy vatana fizika hetsika. Nihalehibe ny taovam-pananan'ny Simpsons, ny tratran'ny vavy, ny mpikambana ao amin'ny tantsaha, ny endrika mifangaro, mifanaraka amin'ny sary, ny fanitsiana natao an-tserasera, avo telo heny.